Spotify na-akwalite nsụgharị ya na ndozi ya dị iche iche | Akụkọ akụrụngwa
Spotify na-ebupụta nsụgharị ọhụụ ọhụrụ ya: free nwerekwu egwu n'efu na goodbye to random mode
Eder Esteban | | Noticias, gụgharia
Nyaahụ, Eprel 24, ụlọ ọrụ Sweden gosipụtara akụkọ ahụ ga-erute nsụgharị n'efu nke ọrụ ya. Spotify kwere nkwa mgbanwe dị ukwuu ma nyefee. Ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ 90 nde na-eji ọrụ n'efu nke ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ mmelite gụnyere, gụnyere njedebe nke usoro enweghị usoro, nke bụ ihe wutere ndị na-azụ ahịa nke ukwuu.
Mana ọ bụghị naanị ihe ọhụụ Spotify gosipụtara n'okwu a. Swedishlọ ọrụ Sweden chọrọ ezigbo mgbanwe nke ha ga-esi too n'ahịa ma mee ka ọnụọgụ ndị ọrụ jiri ọrụ ya dịkwuo elu. Ihe ha nwere olile anya iji nweta ozi a. Kedu mgbanwe ndị ọzọ ha hapụrụ anyị?
Mgbanwe ọzọ bụ na n'ime ngalaba nyocha anyị na-achọta ugbu a awa 40 nke anyị nwere ike ịnụ ọtụtụ oge ka anyị chọrọ. Ọ bụ egwu dabere n'ihe masịrị anyị, yabụ o nwere ike inyere anyị aka ịchọpụta egwu ọhụrụ. Spotify emeela mgbanwe na usoro nkwanye, nke ga-adabere na listi ọkpụkpọ anyị na-ege ntị mgbe niile.
Ndị na-eji Spotify na ya free version enweghị ike iji na-anọghị n'ịntanetị mode. Naanị ndị ọrụ akwụ ụgwọ nwere ike ịnụ ụtọ nke a. Mana ụlọ ọrụ Sweden chọrọ ịkwalite ọnọdụ a. Maka nke a ha na-ewebata a ọrụ ọhụrụ nke ga - echekwa ihe dị ka 75% nke data site na ịpị mgba ọkụ. Ọ bụ ezie na atụmatụ a ga-ewe izu ole na ole iji rute.
Mgbanwe na nhazi nke ngwa Spotify na-echere anyị. Egwú akwadoro maka uru dị ukwuu na ibe obibi. Ọzọkwa, ngalaba Radio ga-adị ntakịrị ntakịrị. Ebe ọ bụ na edochiela ọdụ ndị ọkpụkpọ ahụ. Ya mere, ndetuta ọkpụkpọ a na-enweta ọtụtụ ama na ibe obibi.
Mgbanwe ndị a na-amalite ịbịa Spotify. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ izu nke izu tupu ha niile enwee ike ịnweta ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Spotify na-ebupụta nsụgharị ọhụụ ọhụrụ ya: free nwerekwu egwu n'efu na goodbye to random mode
Google na-akawanye njọ ma chọọ ka ọhụụ ọhụụ ọhụrụ jiri gam akporo Oreo malite
devolo Multiroom WiFi Kit 500+, nweta ezigbo ntanetị ịntanetị n'ụlọ